Fanomanana laza adina bakalorea 2020 – Efa manomboka (...)
Araka ny fandaharam-potoana napetraky ny fitondram-panjakana sy ny lamina napetraky ny #Mesupres dia manomboka androany 21 septambra 2020 no hanatanteraka ny « quarantaine » ireo mpanomana ny laza adina amin’ny fanadinana Bakalorea 2020.
Hatreto dia voahaja tanteraka ny fe-potoana sy fandaharam-potoana mahakasika ny fanomanana ny fanadinana bakalorea.
Noamafisina ny fepetra rehetra na ara-pahasalamana, na ny fandriam-pahalemana ho an’ireo mpikarakara laza adina sy ny toerana hanatanterahana izany.
Miara-misalahy amin’ny Ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin’ny fanatanterahana izany ny zandarmariam-pirenena izay manara-maso akaiky sy miantoka ny fandriam-pahalemana mialoha, mandritra ary ao aorian’ny fanadinana.
Miavaka tanteraka ny « quarantaine » amin’ity taona ity noho izy ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana. Mandray anjara mavitrika araka izany ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka. Efa voamarina fa tsy misy mitondra ny tsimok’aretina avokoa ireo olona rehetra hiatrika ny quarantaine saingy entanina hatrany ny fahadiovana sy ny fanohizana ireo fihetsika sakana rehetra.
Mikato-trano,tsy mahazo mifanerasera na amin’iza na amin’iza izy ireo ao anatin’ny 40 andro mandrapahavitan’ny fanadinana.
''L'éducation consiste à nous donner des idées, et la bonne éducation à les mettre en proportion.'' Montesquieu
1216 visites par jour.